Duqayda magaalada Laasqoray oo cabiray dareenkooda ku aadan beecinta qalabka dhismaha dekedda Laasqoray. – Radio Daljir
Duqayda magaalada Laasqoray oo cabiray dareenkooda ku aadan beecinta qalabka dhismaha dekedda Laasqoray.
Oktoobar 29, 2010 12:00 b 0
Laasqoray, Oct 29 – Qaar ka mid ah duqayda magaalada Laasqoray ayaa baaq u diray madaxda hay’ada Horn Relief, madaxda dawlada Puntland iyo bulshada Puntland. Dad shacab ah oo waxaa jira iyana afkaartooda ku cabiray sida ay u diidan yihiin beecinta qalabka dhismaha dekedda Laasqoray …
M/weyne Faroole oo magacaabay taliyayaasha ciidanka bilayska ee Puntland.
Marwo Fatima J. Jibriil oo xaqiijisay beecinta qalabka dhismaha dekedda Laasqoray, tafaasiilna ka bixisay duruufaha kallifay in qalabka la beeciyo.